area.39 Workspaces & Classroom Services
Comfort & more
We offer comfortable working
environments and classrooms with
a unique price and service.
SPACES SERVICES FOR MEETING, WORKSHOP, SEMINAR AND CLASSROOM
area.39 was founded on idea that on reducing the burden of your spaces rental in Yangon. You do the important business, we do the all other services.
We are able to host up to 200 people with 8 different rooms
We operates our services with joy and happiness.
We open everyday so that customers like you arrange the room access any days.
We are happliy serving almost 200 customers within 1 and half year now.
Prime location at the heart of Yangon, flexible room size, super clean, comfortable chair and desk, electricity and air-conditioning, high-speed fiber-internet, backup generator, classroom materials (whiteboard/ marker/duster), receptionist service, cctv for security.
Flexible room spaces are great place to conduct trainings, workshops, meetings and events for trainners and small businesses who want to getagood starting place.
Privacy is well kept inside the noisy proof tempered glass facility rooms. The meeting hours and number of attendes can be planned in adpative manner.
We're located at the most convinent and accessiable area of downtown in Yangon. Anything you would need to have for aday to work is avaiable around the corner of the 39th street.
We make sure providing you the stable wifi speed while you are working or conducting meetings and workshops. We know the pain of slow internet.
We prepare everyting for you to run your businesses at our spaces. We are local people and we know the power generator is one important thing to be ready for you.
Cold, Hot water, coffee, snacks and often seasonal fruits are for your to think and work better for the day. We pleasure to serve you better.
Start Your Choice
W 7620 MM, L 7620 MM (625 SQFT)
W 6705.6 MM, L 7620 MM (550 SQFT)
W 6339.84 MM, L 3810 MM (260 SQFT)
W 6096 MM, L 3810 MM (250 SQFT)
W 2438.4 MM, L 4724.4 MM (124 SQFT)
English Skills & Translation Class founder
Area.39 - Classrooms & Workspaces services က မြို့ထဲ အချက်အချာကျတဲ့နေရာမှာ ရှိတာကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ သွားလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်ကြာရေး၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ အစည်းအဝေးနဲ့ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး တာမျိုးအတွက်လည်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း English Skills and Translation ဆိုတဲ့ သင်တန်း အမည်နဲ့ ဒီနေရာမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေ ဖွင့်ပြီးသင်လာတာ အခုဆိုရင် ၁နှစ် ၆ လ ကျော်လာပါပြီ။ သင်ကြားရေးအတွက် လိုအပ်တာမှန်သမျှ လိုလေသေးမရှိအောင် ထောက်ပံ့ပေးလို့ အဆင်ပြေပြေ သင်နိုင်ပါတယ်။ ဆက်ဆံရေးကတော့ အပစ်ပြောစရာ မရှိအောင်ကို ကောင်းလွန်းတာကြောင့် ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို မြို့ထဲမှာလုပ်ချင် သူတွေအတွက် မဖြစ်မနေထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်တဲ့နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။
Shwe Gabar Aung
Empowering English founder
Small Business စလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းကို ကောင်းမွန်ပါတယ်။ small business owners တွေအတွက် Risk လည်း အရမ်းနည်းပါတယ်။ စျေးနှုန်းတွေလည်း သင့်တင့်တာကြောင့် မိမိအားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးတွေမှာ အသေးစားစီးပွားရေးဖန်တီးလို့ကောင်းတဲ့ နေရာလေးပါ။
Warlar Tun Shein
စာသင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အစည်းအဝေး လုပ်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သက်သက်သာသာနဲ့ သင့်တင့်တဲ့ Service ကို လိုချင်တယ် ဆိုရင်ဖြင့် Area.39 ကို သတိရလိုက်ပါ။ ကျနော် စာသင်ဖို့ ရှာရင်း တွေ့တဲ့ နေရာလေးပါ။ မြို့ထဲက ဟိုတယ် တစ်ခုက တစ်နာရီ တစ်သောင်း၊ အခြား office space ငှားတဲ့ နေရာက တစ်နာရီ တစ်သောင်းခွဲ လောက် ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ... ... ... (၉) ~ (၁၅) ယောက် ထိ အခန်းကို တစ်နာရီ ၈၀၀၀ ကတော့ တန်ပါတယ်ဗျာ။ အဓိကက စာသင်ဖို့ မဟုတ်လား။ White board ရှိတယ်။ Marker လည်း Provide လုပ်ပေးတယ်။ (ကျနော်က ဂျီများပြီး နက် ပြာ နီ ၃ ရောင် တောင်းတာ ပေးပါတယ်။ 😇😇😇) သောက်ရေကတော့ water cooler ရှိတယ်။ စက္ကူခွက်လည်း Provide လုပ်ပေးတယ်။ အိမ်သာကတော့ မတက်ကြည့်ရသေးဘူး။ LOL ဒီတစ်ခါ သုံးရင် တက်ကြည့်လက်မယ်နော် 😍😍😍3Star service လို့ ပြောရမလား (ကိုယ့် တစ်ယောက်စာကတော့5Stars ပေးပြီးသားပါ 😅😅😅) ကဲကဲ အမျိုးတွေရေ နေရာ အထက်အခဲ ရှိနေတယ် ဆိုရင် ခေတ်ကာလက ဒီလို Service တွေလည်း ပေါ်နေပါပြီလို့။ နော်။ သတင်းကောင်းလေး လာပါးတာပါညှော်ရို့ 😘😘😘
Booking time: 9:00AM ~ 6:00PM
No. 202, ground floor, 39th street, kyauktada township, yangon.
© 2020 area.39 All Rights Reserved.